मधेशी नेताबाट आन्दोलनकारीलाई धोका | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » मधेशी नेताबाट आन्दोलनकारीलाई धोका
मधेशी नेताबाट आन्दोलनकारीलाई धोका
saharatimes Friday, October 23, 20150No comments
नेता, संजयकुमार दास यादव
२०६३÷०६४ को आन्दोलनपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल गएपछि पार्टी छाडेर दोस्रो सविधानसभा चुनावपछि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको पार्टीमा गएका थिए तर अहिले गच्छदारले पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा गएपछि सो पार्टीलाई छाडेर आन्दोलनमा रहेका संजयकुमार दास यादवसँग उनकै निवासमा सहारा टाइम्सले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
तपाई गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) पार्टी किन छाड्नु भयो ?
–अहिलेको आन्दोलनको म्याण्डेट सरकारमा जानु थिएन । मधेशको पूर्ण अधिकार प्राप्त नभएसम्म सत्ताको वरिपरी पनि जानु हुँदैन्थ्यो तर हाम्रो पार्टीले मधेशी जनताको म्याण्डेट र साथलाई लत्याएर सत्तामा गए । आन्दोलन कुनै दलका नेताले होइन मधेशी जनताले गरिरहेका छन् । र, म मधेशी जनताको साथमा छु । आन्दोलनमा छु ।
पार्टी छाडेपछि अब कहाँ जानु हुन्छ के गर्नुहुन्छ ?
–अहिले कही पनि जान्न । आन्दोलन कसरी सफल हुन्छ । त्यसकै चिन्तामा छु । सो पार्टीबाट थुप्रै साथीहरुले राजिनामा दिनु भएको छ । उहाँहरुसँग सल्लाह हुँदैछ के गर्ने नगर्ने विषयमा आन्दोलन पछि तय हुन्छ । अहिले कहि कतै जाने अवस्था छैन ।
तपाईको पार्टी सरकारमा गएपनि अरु दलहरु त आन्दोनलमै छन् । तपाईले पहिला छाडेको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल अहिलेका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सडकमै छन् त्यता फर्किनु हुन्छ कि ?
–मैले अघि नै भने कि कहाँ जाने के गर्ने भने कुरा आन्दोलन पछिको कुरा हो तर फोरम नेपालमा फर्किने कुरा पनि हुँदैन । म त फोरम लोकतान्त्रिक र फोरम नेपालमा कुनै तात्विक फरक देख्दिन । दुईटै दल आन्दोलनको विरुद्धमा गलत काम गरेका हुन् । दुइटैले आन्दोलनको म्याण्डेट विरुद्ध काम गरेका हुन् । दुवै दलले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिएका हुन् । गच्छदारको पार्टीले मत दिएका पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो र उपेन्द्रहरुले मतदान गर्नुभएका दल पराजाय भए । गच्छदारले मतदान गरेका पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्र गच्छदार सरकारमा गएका हुन् यदि उपेन्द्रहरुले मतदान गरेका पार्टी सरकार बनाउन सफल भएको भए उहाँहरु पनि सरकारमा पक्कै जान्थे । उहाँहरुले पनि गच्छदार जस्तै आठ बुँदे सम्झौता वा कुनै सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागि हुन्थे । त्यसैले दुवै दलमा कुनै फरक छैन । अहिले बचाउका लागि विभिन्न तर्क उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ ती सबै वहियात हुन् । जनतालाई भ्रममा राख्ने तर्कहरु मात्रै हुन् । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा आन्दोलनकारी दलहरुले भाग लिएर मधेशलाई कति क्षति पुर्याएको छ त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन । यसअघि अन्तराष्ट्रिय जगतले पनि ५१ प्रतिशत जनता नयाँ सविधानको विरोधमा छ भनि रहेका थिए तर अब उनीहरुले पनि आन्दोलनकारी दलहरु सविधान मानि नै सकेका छन् भने के को आन्दोलन भनिरहेका छन् अर्थात अन्तराष्ट्रिय जगतको विश्वास उठि सकेको छ ।
तपाई त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । पार्टीका अध्यक्षले यत्रो ठूलो निर्णय तपाईहरुलाई नसोधी पक्कै पनि नगरे होला कि कसो ?
–म केन्द्रीय सदस्य भएपनि मेरो कार्यक्षेत्र मधेश नै हो । म मधेशमै हुन्छु । त्यसैले यहाँसम्म सोध्ने त कुरै हुँदैन जो काठमाडौमै हरहमेशा हुनुहुन्छ । पार्टीका उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्यहरु, संसदहरुलाई समेत यो कुराको जानकारी थिएन । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मतदान गर्ने कुरा कसैलाई जानकारी दिएका थिएन । बरु असोज २४ गते विहानसम्म काँग्रेसलाई मतदान गर्ने हल्ला थियो । तर ओलीलाई मतदान गर्ने कुरा कसैसँग पनि सोध्नु भएका थिएन । उपाध्यक्ष जितेन्द्र देव र महासचिव रामजनम चौधरीलाई मात्र उहाँले सोध्नु भएको थियो । संसदहरुलाई पनि संसद बैठक शुरु हुनेबेलामा मात्र ओलीलाई मतदान गर्नुपर्छ भनि जानकारी दिनु भएको थियो । त्यसैले यो एक्लौटी ढंगबाट निर्णय गरेर सरकारमा जानु भएको हो । यसमा कसैको सहमति छैन । कसैको सहमति नभएको कारणले नै अहिले पार्टीबाट भटभटा राजिनामा दिएर निस्कि रहेका छन् ।
मधेशमा भइरहेको अहिलेको आन्दोलनलाई कसरी लिनु भएको छ ?
–हेर्नुस्, यो आन्दोलन अब कुनै नेता वा दलको भरमा भइरहेको छैन । आन्दोलनको जस अपजस नेताहरुले लिइरहेका छन् त्यो बेग्लै कुरा हो तर जनताले आफ्नो बलमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपालमा हल्ला छ कि यो आन्दोलन भारतले गराएका हुन् तर म यो कुरा मान्न तयार छैन । हुनसक्छ नाकाबन्दीमा भारतको सहयोग होला तर सडक आन्दोलनमा कसैको सहयोग छैन । जनताले आफ्नो बलमा गरिरहेका छन् । तपाईलाई विश्वास नभए शहरबजारको चौक गल्लीमा जानुस् जनताको अर्थात आन्दोलनकारीसँग राय लिनुस् उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ आफै थाह पाउनु हुन्छ । मधेशी जनतामाथि मधेशी मोर्चा तथा अन्य दलका नेताहरुले विश्वासघात गरेको छ । आन्दोलनकारीलाई अघात पुगेको छ । जुन प्रकारका व्यवहार देखाउनु भयो उहाँहरुले त्यसबाट मधेशी जनतालाई निकै अघात पुगेको छ । त्यसैले अहिलेको आन्दोलन आफ्नो ढंगबाट अगाडि बढी रहेको छ ।
अरु जिल्ला भन्दा सिरहामा यसपटक आन्दोलन अलि कमजोर देखिएको किन ?
–हो तपाईले सही भन्नुभयो । अरु ठाउँभन्दा यसपाली सिरहाको आन्दोलन कमजोरी देखिनुमा नेताहरुको अदुरदर्शिता र अव्यवहारका कारणले हो । विगतमा सिरहाको लहानबाट मधेश आन्दोलनको शुरुवाता भएको थियो । रमेश महतोको हत्यापछि मधेश आन्दोलनको शुरुवाता भएको हो । तर, पछि लहानसँग, यहाँका आन्दोलनकारीसँग यहाँका जनतासँग मधेशी नेताहरुले कस्तो व्यवहार गरे त्यो कसैबाट लुकेको छैन । यसपटक पनि मधेशी मोर्चाका नेताहरुले रमेश महतो जस्तै कार्यकर्तालाई हत्या गराएर आन्दोलनलाई उठाउन चाहेका छन् अगाडी बढाउन चाहेका छन् तर जनता सचेत भएका छन् । यति थोरै दिनमा ४५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो यही नेताहरुका कारण । यी नेताहरु आफू काठमाडौमा बसेर जनतालाई उक्साउथे र मार्न लगाउँथे । जनताको लाशमाथि राजनीतिक गर्थे । जसको उदाहरण प्रधानमन्त्रीको चुनावमा देखि हाल्यो ।
त्यसो भए तपाईको विचारमा आन्दोलन कसरी हुनुपर्छ त ?
–पहिलो कुरा कुनै पनि आन्दोलन एकैनाशले हुनु हुँदैन । राज्यले जस्तो नीति लिन्छ । आन्दोलनकारीसँग जस्तो व्यवहार गर्छन् त्यसरी नै आन्दोलनको स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । आन्दोलनकारीमाथि राज्य दमन गर्न थालेपछि पनि त्यही रुप र मार्न थालेपछि पनि त्यही रुपमा आन्दोलन आगाडी बढ्न सक्न सक्दैन । दिनमा चार जना पाँच जना आन्दोलनकारीलाई मार्ने गर्थे तर नेतृत्वकर्ताले आफ्नो आन्दोलनमा कुनै परिवर्तन ल्याएन । अर्थात युद्ध र आन्दोलन भनेको रणनीति पनि हो । राज्यले जसरी जसरी रणनीति बनाउँथे त्यसरी आन्दोलनकारी पनि बनाउनु पथ्र्यो । अर्को कुरा मधेशी जनता अहिले पनि अन्योलमा छ कि हाम्रो माग के हो । पुरानै मागको रट लगाएर अहिलेसम्म बसेका छन् । मधेशी नेताहरुले भन्नुपर्छ कि हामीले उठाएको मागमध्ये यी यी पूरा भयो । यो मात्रै पूरा हुन बाँकी छ । स्पष्ट पार्दियो भने आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन झन सजिलो हुन्छ नत्र यसमा के हुन्छ भने एक नेताले हाम्रो यो माग पूरा भइसकेको छ भनिरहेका हुन्छन् भने कतिपयले यो माग पूरा भएको छैन भनि रहेका हुन्छन् त्यसले जनतामा अन्योल हुन्छ र आन्दोलनमा गति दिन गाह्रो भइरहेको हुन्छ । अहिले नै कतिपय नेताहरुले हाम्रो मुख्य माग सिमांकन नै हो । अरु अरुमा लगभग कुरा मिलिसकेको छ भनिरहेका छन् तर जनतामा एउटा भ्रम फैलाइएको छ कि हाम्रो कुनै पनि माग पूरा भएको छैन । सविधानले हामीलाई कुनै पनि अधिकार दिएको छैन । यदि कुरा यही हो भने मधेशी जनताले प्रष्टसँग भन्नुपर्यो ।
‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सुरक्षा देऊ’
काठमाडौँ, वैशाख १० गते । निर्वाचन आयोगले आइतबार राति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको धापाखेल, ललितपुरस्थित निवासमा अज्ञात सम...